13 février 2020 · déliremadagascar
Archives journalières 13 février 2020
Socio-eco	 13 février 2020 R Nirina
Teny amin’ny trano fonenan’i MAMAFI Kissinger, tamin’ny asabotsy voalohan’ny volana febroary 2020 no nisehoan’ity fiarahana ity. Ny hoe MAMAFI dia Malagasy Mankafy Fiainana. Tsy fifampiarahabana tratry ny taona no anton’ny fety na dia mbola fotoana fifanaovana izany aza izao. Tsy fihaonan’ny tantsambo tranainy koa na dia maro tamin’izy ireo aza no tsikaritra teny. Tsy fihaonan’ny mpianakavy, satria azo nisaina tamin’ny rantsan-tanana ny fianakaviana hita teny.
Fihaonan’ny samy mpinamana fotsiny
Ny tena marina dia fiaraha mifaly sy fampihaonana nataon’I MAMAFI Kissinger ho an’ireo namany amin’ny sehatra samihafa. Ankoatr’ireo izay efa voatanisa etsy ambony dia tao koa ny mpiara-miombona antoka aminy eo amin’ny sehatry ny asany ao amin’ny CFM. Tsy diso anjara tamin’izany ny sakaiza mahatoky ao amin’ny haino aman-jery, sy ny maro hafa tsy voatanisa. Raha fintinina dia ireny tapaka sy namany ireny no tiany ho hita miaraka ka ampifankalalaina koa sy hananany fifandraisana eo amin’izy samy izy. Olona tsy nila fampihavanana akory ireo, fa tiany hanana fifandraisana eo amin’izy samy izy, hifamatotra ho mpinamana vaovao.
Toy ny korana rehetra dia nisy ny fiaraha mizara ny manta sy ny masaka. Tsy toy ireny amin’ny hotely lehibe fisakafoanana ireny akory, fa sakafon’ny mpianakavy tsotsotra ihany. Vary sy laoka fotsiny, ary na dia ny sotrobe fandoharam-bary sy fandoharan-daoka aza dia tsy nisy mpitantana manokana fa samy naka izay metimety aminy tao anaty vilany. Nisy ny fiaraha miala hetaheta araka izay tian’ny tsirairay sy zakany, tsy nisy ny mofomamy mahazatra. Ny voankazo koa no nanaranam-po.
Sarim-pianakaviana no nalaina alohan’ny hisian’ny sasantsany izay tsy maintsy niainga alohaloha, ka hitanao eto ny soritry ny fifaliana, ny hamaroan’ny olona, ary angamba koa ny hafanan’ny andro izay nanomboka nidanika.
Raha samy mitondra namana hafa koa izy ireo amin’ny manaraka dia ho feno ny tanàna